I-Recipe Ubisi lwekhononti kunye ne-shavings
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Izithako I ziqhamo Ikhokoni
Ubisi lweKoconut kunye ne-shavings
Ukulungiselela i-coconut i-chips ngokwabo Kwi-recipes zasempuma, kwaye kungekudala e-Yurophu, ubisi lwekakhukhi lufumaneka rhoqo njengesithako. Ukuba iikhonkco zithengiswa phantse kuyo yonke ivenkile, andizange ndibone ubisi lwekakhukhunathi kwisixeko sethu, nakwii-hypermarket, kwaye zithi ixabiso layo liyakhathaza kakhulu, ngelixa iikonkonti zithengwa ngokwaneleyo. Ngoko ke, siza kwenza ubisi lwekakhukhunathi, kwaye ngelo xesha sifunde iingubo ezimnandi. Kuyiluncedo kakhulu kule yobisi nakwixesha lokuzila. Amagama ambalwa malunga nokukhethwa kwekakhukhunathi: kufuneka ibe namandla esandleni sakho kwaye xa ugubha ngokuvakalayo ukuva ukutywala kwamanzi. Ukuba i-liquid idibanisa encinci okanye ayikho nhlobo, i-coconut sele ichithwe. Kwakhona, ungathengi ikhokonti, ebumba amanqaku emehlweni.
Ikhononi 1 pc.
Amanzi 350 ml
Inyathelo 1 Ukupheka, sidinga kuphela izithako ezi-2: ukhukhunathi namanzi.
Inyathelo 2 Thatha iisisi ngamanqatha amancinci okanye isikhonkwane kwaye ukhethe ngokukhawuleza kwamehlo kwikhokoni. Amabini aya kuvalwa ngokuqinile kwaye ingcinezelo ayiyi kuhlulwa, kwaye isithathu iya kuvula lula.
Inyathelo 3 Yandisa kwimiba yomlenze uze uthule umbane kwi coconut. Amanzi ekhukhunathi, ayiluncedo naphi na, kodwa unokuyiphuza kuphela, uyayithandayo inomso.
Inyathelo 4 Thatha inyundo, umlinganiselo ukusuka phezulu kwisithathu kwaye uqale ngokuphela ngokugqithiseleyo kwesando sokubetha ikhonkco kwi-ring. Inzame eninzi ayifuniyo, kodwa kufuneka uthayiphe isisindo esaneleyo ukuze uthethe. Emva kwexesha kuya kubakho ukuphazamiseka. Ukufakela ummese onqabileyo okanye isisitshe ekuqhekekeni, siphula ikhokoni kwiindawo ezi-2.
Inyathelo lesi-5 Ngokulandelayo, kufuneka sisuse inyama kwinqanaba eliqinileyo lekhonkco, ngenxa yoko sifaka iqela phakathi kwegobolondo kunye nenyama kwaye siwaphule. Kwinqanaba elichaphazela igobolondo, kuya kubakho ifilimu ebomvu, kufuneka ihlambuluke ngokucophelela.
Inyathelo 6 Iingqayi zekhenkco ezintathu kwi-grinder yokudibanisa okanye kwi-grater yesiqhelo (kulo mzekelo, umzamo uzakuchithwa ngaphezulu).
Isinyathelo 7 Thela ikhukhamba ebilisiwe ngamanzi abilayo ukuze amanzi aphakame kunye neepps, kwaye ushiye imizuzu engama-40.
Isinyathelo 8 Kwiincinci ezincinci, galela i-coconut mass in a sieve ehlanganiswe ne-double layer of gauze okanye i-cotton cloth. Ukucoca ngokukodwa umbane, ukucoceka kwekakhukhunathi kuhlehlisiwe. Siyaphinda de kube i-mass mass isiphelile.
Inyathelo 9 I-liquid ehlanjulweyo ibisi lekakhukhunathi. Xa udibanisa, qaphela indlela othole ngayo. Ngokuqhelekileyo, ubisi bokuxinwa kokuqala kuthiwa ukhilimu, kodwa unokuwuthululela kwakhona kwaye wenze ukubunjwa okungaphantsi kwexesha, ngokuqhelekileyo kusetyenziswa isobho.
Inyathelo 10 Ubisi lungagcinwa iiyure ezingama-24 kwifriji kwisitya esingenasiphelo esinesiqhekeza. Emva kokuma, ubisi luhlulwe ngamacandelo amabini, phezulu kukho ioli, kwibisi elisezantsi, ngaphambi kokusebenzisa kuyimfuneko ukuxuba yonke into. Umthi ogqithiseleyo uluhlu lweoli, ilula kakhukhunathi. Andizange nditshitshise.
Inyathelo 11 Hlanganisa iipokethi zekhakhamba kwiphepha lokubhaka elifakwe iphepha elibhakayo kwaye lome ngomnyango we-ovini uvulwe kwiqondo lokushisa lama-50-60 degrees. Kuvela ngokugqithiseleyo kwaye kunomdla ngaphezu kwevenkile.
Iipesele ezenziweyo kunye namanqatha
Inkukhu eFilippines ngeyinaninate
Ilayisi yekakhukhunathi yaseKhaya
Isaladi kunye nemifuno emnyama
Blueberry fritters nge yogurt
Iipropati ezisetyenziswayo zetamatati
Ndiyakuthanda umntwana okhulayo?
Indlela yokuthetha umtya omnandi womtshato
Umkhwa wokucela ibhokhwe inxalenye yentuthuko
Ukusela njani iilitha ezimbini ze-vodka kwaye ungadakwa?
Ixabiso lomhlobo: UNatalie Sturm wanikela ingoma ku-Evgeny Asin
Ubomi bomntu siqu kaKsenia Sobchak
Ngaba ufuna ukuhlala ixesha elide - ususe "iiglasi ezikhanyayo"
I-Raspberry, amaqabunga: amayeza
I-Porridge ye-lentile ebomvu ngee curry
UVgeny Tsyganov waba nguyise ngexesha lesixhenxe
Ibhotela le-Buckwheat kunye nenkukhu kunye nemifuno phantsi kwe-foil